Kôrea Atsimo - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Korea Atsimo)
대한민국 / 大韓民國 ((ko))
Daehan Min-guk ko
Repoblikan'i Kôrea ((mg))
Teny filamatra : 널리 인간세상을 이롭게 하라 (홍익인간)
Teny ofisialy Fiteny koreanina
Tanàna ngeza indrindra Seoul
- Rano (%) faha 107
- hakitroka faha 25
49 232 844 mpo.
Anaran'ny mponina Kôreanina
IDH (2006) Mihakatra 0,928 (élevé) faha 25}
Sandam-bola Won(원, KRW, ￦) (KRW)
I Kôrea Atsimo dia firenena ao amin' ny faritra atsimon' ny Saikanosy Kôreanina, amin' ny faritra avaratra-atsinanan' i Azia. Ny renivohiny dia Seoul. Ny anarana ôfisialin' ny Repoblikan' i Kôrea Atsimo dia Repoblikan' i Kôrea amin' ny teny malagasy ary 대한민국 / Daehan Minguk amin' ny fiteny kôreanina. Miaina ao amin' ny renivohi-pirenena Seoul ny 50 %n' ny Kôreanina tatsimo. Anisan' ny tanàna be mponina indrindra eto an-tany ny tanànan' i Seoul, ary ny lahatsoratra sasany dia milaza fa izy io no tanàna lehibe indrindra eto an-tany manaraka an' i Tokyo ao Japàna.
3.1 Fizaran'ny tany
4.1 Fiteny kôreanina
Ny tantaran'ny Kôrea Atsimo dia nanomboka tamin'i Gojoseon Dangun Wanggeom. Resin'ny Sina entin'ny fiankohonana Han ny Gojoseon. Rehefa nitontongana tokoa i Gojoseon dia maro ireo firenena nipoitra toa i Buyeo sy Okjeo sy Dongyae ary Samhan. Baekje sy Goguryeo ary Silla no nahery indrindra tamin'izy ireo. Ny fe-potoana nisian'ireo fanjakana ireo dia antsoina hoe Fotoan'ny Fanjakana Telo. Resin'i Silla niaraka tamin'ny mpanohana Sinoa nentin'ny fiankohonana Tang ny Fanjakana Goguryeo ary Baekje, ary navondron'i Silla ho tokana ireo fanjakana telo ireo.
Nisy fanjakana iray hafa Balhae izay noforonin'i Dae Jo-Young. Ny fe-potoana iombonana nisy an'i Balhae sy Silla dia antsoina hoe Fotoan'ny Fanjakana Tavaratra sy Tatsimo. Nahatonga ny fiforonan'ny firenena vaovao nantsoina hoe Goryeo ny fikomiana tao amin'ny Fanjakan'i Silla. Resin'i Môngôlia ny Fanjakan'i Goryeo. Tany amin'ny faram-paran'ny fotoana nanjakan'i Goryeo dia nisy ny mpitondra tafika lehibe Lee Seong-Gye. Nibaiko azy hitoetra ao Yodong ny mpanjakan'i Goryeo fa nanohitra izany izy. Na dia izany aza dia Nankany Yodong izy azy nitoetra tao, fa niverina tany Goryeo izy ary nikomy. Nahomby ny fikomiany ary nanorona ny firenena Joseon izy. Ny mpanjaka voalohan'i Joseon, Taejo dia nanova ny renivohitra ho any Hanyang (Seoul ankehitriny).
Ny mpanjaka Joseon fahaefatra, Sejong, dia namorona ny abidy koreanina Hangeul. Ny mpanjaka faharoa ambin'ny roapolo Jeongjo dia nanangana ny rovan'i Hwaseong tao Suweon. Ny mpanjaka fahaenina ambin'ny roapolo Gojong dia nanova ny anaran'ny firenena ho Empiran'i Kôrea. Rehefa nihanalefaka ny fahefan'ny empira dia nanafika ilay firenena i Japàna ary nitoetra tao nandritra ny 35 taona ka tsy niala tao raha tsy tamin'ny faran'ny Ady Lehibe Faharoa tamin'ny 1945. Nipoaka tamin'ny 1950 ny Ady Kôreanina ka vokatr'izany dia voazara roa ny firenena: Korea Avaratra ary Kôrea Atsimo.
Sarintany ara-kaavon-tanin'i Korea Atsimo
Ny Kôrea Atsimo dia ao atsinanan'i Azia. Ireo firenena manodidina azy dia Japàna any atsinanana; Kôrea Avaratra izay mizara sisintany aminy ary Sina izay any andrefany. Ao atsimon'ny tanjona Koreanina no misy azy. Tany be tendrombohitra i Kôrea Atsimo ary, ary maro ireo nosy madinika tsy lavitry ny morontsirany. Ny renivohi-pirenena Seoul dia akaikin'ny sisin-tany koreanina tavaratra. Ny nosy lehibe indrindra dia ny nosin'i Jeju ary ny tendrombohitra avo indrindra dia Hallasan ao Jeju.
Ny Kôrea Atsimo dia maka ny faritra atsimon'ny saikanosy koreanina izay miitatra 1.100 kilômetatra avy amin'ny tanibe Aziatika. Ny saikanosy be tendrombohitra ida voadidin'ny Ranomasina Mavo any andrefany, ny Ranomasin'i Japana any Atsinanany. Ny tanjony atsimo dia ao amin'ny Lakandrano Kôreanina ary ny Ranomasin'i Sina Atsinanana.
Ny firenena ary nosiny rehetra dia eo anelanelan'ny laharam-pehintany faha-33 hatramin'ny faha-39 ary amin'ny laharan-jarahasina faha-124 ary faha-130. Ny velarantaniny manontolo dia 100.032 km².
Ny Kôrea Atsimo dia azo zarazaraina ho faritra efatra lehibe: ny faritra atsinanana izay ahitana tangorom-bohitra avo ary tany lemaka amin'ny morontsiraka; ny faritra andrefana izay ahitana tany lemaka mivelatra amin'ny morontsiraka, renirano ary havoana; ny faritra atsimo andrefana izay ahitana tendrombohitra sy lohasaha; ny faritra atsimo atsinanana izay ahitana ny tany lemaka manodidin'ny renirano Nakdong.
Tendrombohitra izay tsy mety ovaina ho tanim-boly no ankabeazan'ny tany ao Kôrea Atsimo. Ireo tany lemaka izay hita eo amin'ny faritra andrefana ary atsimo atsinanana dia 30% monja ny velarantany manontolo.
Lavitry ny morontsiraka andrefana ary atsimo atsinanan'i Kôrea Atsimo dia ahitana nosy telo arivo eo ho eo. Eo amin'ny 100 kilometatra miala ny morontsiraka atsimon'i Kôrea Atsimo ny nosin'i Jeju. Io no nosy lehibe indrindra ny firenena, izay manana velarantany 1.845 kilometatra tora-droa. Ao Jeju ihany koa no ahitana ny tendrombohitra avo indrindra ao Korea Atsimo: ny Hallasan izay volkano efa maty izay manana haavo 1.950 m. Ny toerana atsinanana indrindran'i Kôrea Atsimo dia ny Ulleungdo ary ny Vato Liancourt (Dokdo/Takeshima), ary ireo toerana atsimo indrindra dia ny Marado ary ny Vato Socotra.
Ahitana valam-pirenena roapolo ary toerana malaza toa ny Sahan-diten'i Boseong, ny Vala Ekolojikan'ny Hoalan'i Suncheon ary ny Valam-pirenen'i Jirisan.
Ny Kôrea Atsimo dia manana toe-tany ara-kaontinanta ary toe-tany sobtrôpikaly mandomando voanjadian'ny mosao Aziatika Tatsinanana. Ny fotoan'ny orana dia ny faran'ny Jona hatramin'ny faran'ny volana Jolay. jangma no iantsoana izany fotoana izany. Mety ho mangatsiaka be ny andro ririnina ary mety hilatsaka ambanin'ny -20°C ny mari-pana amin'ny faritra any afovoan-tany. Ao Seoul ,ny mari-pana amin'ny volana Janoary dia -7°C hatramin'ny 1°C ary ny mari-pana amin'ny volana Aogositra dia eo amin'ny 22 hatramin'ny 30°C. Ambony kokoa ny mari-panan-dririnina amin'ny morontsiraka atsimo, ary ambany kokoa izy amin'ny afovoan-tany izay be tendrombohitra.
Mety ho hafana sady mando ny andro fahavaratra amin'ny mari-pana izay mety mihoatra ny 30°C na aiza na aiza ao amin'ny firenena. Ahitana karazam-potoana efatra ao Kôrea Atsimo: lohataona, fahavaratra, fararano ary ririnina. Ny lohataona dia manomboka amin'ny faran'ny volana Martsa hatramin'ny volana Mey, ny fahavaratra dia avy amin'ny Mey hatramin'ny Septambra, ny fararano dia Septambra hatramin'ny Novambra ary ny ririnina dia manomboka amin'ny Novambra hatramin'ny fisasahan'ny volana Martsa.
Tonga eo anelanelan'ny Jiona sy Septambra ny ankamaroan'ny latsak'orana. Ny morontsiraka atsimo dia iharan'ny rivo-doza amin'ny faran'ny fahavaratra izay miteraka rivotra mahery, oram-batravatra ary tondra-drano. Ny latsak'orana isan-taona eo amin'ny 1370 milimetatra any Seoul ka hatramin'ny 1.470 milimetatra any Busan.
Fizaran-taona[hanova | hanova ny fango]
Azo aseho an-tsary toy izao ny fizaran-taona:
Maina/misy oram-panala Manorana
Mangatsiaka Mafana Antonony
Mangatsiaka/maina Mafana/maina Manorana
Fampahalalana mikasika ny toe-tanin'i Korea Atsimo
23.6 24.5 28.2 33.7 37.4 38.0 39.9 41.0 37.5 32.1 28.0 23.3 Endrika:Max/12
−32.6 −27.9 −23 −14.6 −4.7 −1.7 4.4 3.3 −2.3 −9.9 −18.7 −26.8 Endrika:Min/12
Janoary 23.6 °C (74.5 °F) 7 Janoary 2020 Jeju City, Faritanin'i Jeju
Febroary 24.5 °C (76.1 °F) 21 Febroary 2004 Jeju City, Faritanin'i Jeju
Martsa 28.2 °C (82.8 °F) 9 Martsa 2013 Jeonju, Faritanin'i Jeolla Avaratra
Aprily 33.7 °C (92.7 °F) 28 Aprily 2005 Uljin, Gyeongsang Avaratra
Mey 37.4 °C (99.3 °F) 31 Mey 2014 Daegu City, Faritanin'i Daegu
Jona 38.0 °C (100.4 °F) 26 Jona 1958 Daegu City, Faritanin'i Daegu
Jolay 39.9 °C (103.8 °F) 27 Jolay 2018 Uiseong, Gyeongsang Avaratra
Aogositra 41.0 °C (105.8 °F) 1 Aogositra 2018 Hongcheon, Faritanin'i Gangwon
Septambra 37.5 °C (99.5 °F) 1 Septambra 1944 Daegu City, Faritanin'i Daegu
Oktobra 32.1 °C (89.8 °F) 1 Oktobra 1977
1 Oktobra 1999
Mokpo, Faritanin'i Jeolla Atsimo
Jeju City, Faritanin'i Jeju
Novambra 28.0 °C (82.4 °F) 8 Novambra 1920
2 Novambra 2010
Jeonju, Jeolla Avaratra
Desambra 23.3 °C (73.9 °F) 3 Desambra 2018 Jeju City, Jeju
Janoary −32.6 °C (−26.7 °F) 5 Janoary 1981 Kaontian'i Yangpyeong, Faritanin'i Gyeonggi
Febroary −27.9 °C (−18.2 °F) 6 Febroary 1969 Chun Cheon, Faritanin'i Gangwon
Martsa −23.0 °C (−9.4 °F) 8 Martsa 1983 Daegwallyeong, Faritanin'i Pyeongchang
Aprily −14.6 °C (5.7 °F) 2 Aprily 1972 Daegwallyeong, Faritanin'i Pyeongchang
Mey −4.7 °C (23.5 °F) 16 Mey 1977 Daegwallyeong, Faritanin'i Pyeongchang
Jona −1.7 °C (28.9 °F) 1 Jona 2010 Daegwallyeong, Faritanin'i Pyeongchang
Jolay 4.4 °C (39.9 °F) 5 Jolay 1976 Daegwallyeong, Faritanin'i Pyeongchang
Aogositra 3.3 °C (37.9 °F) 27 Aogositra 1977 Daegwallyeong, Faritanin'i Pyeongchang
Septambra −2.3 °C (27.9 °F) 23 Septambra 1980 Daegwallyeong, Faritanin'i Pyeongchang
Oktobra −9.9 °C (14.2 °F) 25 Oktobra 1982 Daegwallyeong, Faritanin'i Pyeongchang
Novambra −18.7 °C (−1.7 °F) 22 Novambra 1973 Daegwallyeong, Faritanin'i Pyeongchang
Desambra −26.8 °C (−16.2 °F) 24 Desambra 1973 Wonju, Faritanin'i Gangwon
Kôrea Atsimo dia demôkrasia, midika izany fa afaka mifidy ny governemantany ny olona. Ny Filohan'i Kôrea Atsimo dia voafidy mandritra ny dimy taona, ary tsy afaka mijoro fanindroany amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ny filoha ankehitriny dia Moon Jae-In hatramin'ny 10 Mey 2017. Ny filoha teo aloha, Park Geun-Hye, dia natao ho an'ny kolikoly.
Eo ambanin'ny lalàm-panorenana misy azy ankehitriny dia antsoina hoe repoblika fahenin'i Kôrea Atsimo ny fanjakana. Tahaka ireo firenena demokratika maro, ny governemanta Koreana dia mizara ho sampana telo: fahefana manatanteraka, fahefana mitsara ary fahefana mamoaka lalàna. Ny sampana mpanatanteraka sy ny solombavambahoaka dia miasa eo amin'ny sehatra nasionaly, na dia manao asa ao an-toerana aza ny ministera samihafa ao amin'ny sampana mpanatanteraka. Ny governemanta ao an-toerana dia mahaleotena amin'ny ampahany, ary ahitana vondrona manatanteraka ary manao lalàna ho azy manokana. Ny sampana fitsarana dia miasa eo amin'ny sehatra eram-pirenena ary eo an-toerana.
Fizaran'ny tany[hanova | hanova ny fango]
Ao Kôrea Atsimo dia faritany valo, faritany mizaka tena manokana iray, tanàn-dehibe enina (tanàna mizaka tena izay tao amina faritany), tanàna manokana iray ary tanàn-dehibe mizaka tena iray.
Tanàna manokana (Teukbyeolsi)a
Seoul 서울특별시 서울特別市b 9.830.452
Busan 부산광역시 釜山廣域市 3.460.707
Daegu 대구광역시 大邱廣域市 2.471.136
Incheon 인천광역시 仁川廣域市 2.952.476
Gwangju 광주광역시 光州廣域市 1.460.972
Daejeon 대전광역시 大田廣域市 1.496.123
Ulsan 울산광역시 蔚山廣域市 1.161.303
Tanàn-dehibe mizaka tena (Teukbyeol-jachisi)a
Sejong 세종특별자치시 世宗特別自治市 295.041
Gyeonggi 경기도 京畿道 12.941.604
Chungcheong Avaratra 충청북도 忠淸北道 1.595.164
Chungcheong Atsimo 충청남도 忠淸南道 2.120.666
Jeolla Avaratra 전라북도 全羅北道 1.847.089
Jeolla 전라남도 全羅南道 1.890.412
Gyeongsang Avaratra 경상북도 慶尙北道 2.682.897
Gyeongsang Atsimo 경상남도 慶尙南道 3.377.126
Faritany mizaka tena manokana (Teukbyeoljachi-do)a
Jeju 제주특별자치도 濟州特別自治道 661.511
I Kôrea Atsimo dia ianjadian'ny kolontsain'ny kontinanta sy ny kolontsaina an-dranomasina noho izy ao anaty saikanosy. Ny kolontsaina koreanina tatsimo nentindrazana dia namolavola ny kolontsainan'i Siberia, izay ao amin'ny ampahany avaratr'i Azia Afovoany sy ny faritra atsimon'i Azia Atsimo Atsinanana ary ny firenena mpifanolo-bodirindrina toa an'i Sina.
Fiteny kôreanina[hanova | hanova ny fango]
Ny fiteny kôreanina no teny ôfisialy ary fampiasa mahazatra ao Kôrea Atsimo. Maro reo mpahaitsikerafiteny milaza fa ao amin’ ny vondron’ ny teny altaika ilay fiteny. Ny hangul izay ampiasaina amin’ ny fanoratana ny teny kôreanina dia navoakan’ i Sejong tamin’ ny 1446. Io irery ny abidy fanta-datim-piforonana ary fanta-mpamorona.
↑ kopian'ny arisiva. archived from the original on 2010-05-31 Retrieved on 2018-12-05.
↑ Ny faritra voahevitra dia mitombo isan-taona isan-taona, angamba noho ny fitakian-tany. 행정구역(구시군)별 국토적. Korea Statistical Information Service (in Korean). Retrieved March 27, 2006.
↑ 3,0 3,1 et 3,2 Korea's Geography asianinfo.org
↑ Fitantanan-draharaha mikasika ny haitoetrandro ao Korea.
↑ "Index of Democracy 2008" (PDF). The Economist Intelligence Unit.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kôrea_Atsimo&oldid=1040754"
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 14:43 ity pejy ity.